၆၇ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ် ေတာ်လှန်ေရး​ေန့အတွက် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်မှ ေပးပို့ေသာ သဝဏ်လွှာ
ပင်မ»ြပန်ြကားေရး»သတင်းထုတ်ြပန်ချက်»၆၇ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ် ေတာ်လှန်ေရး​ေန့အတွက် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်မှ ေပးပို့ေသာ သဝဏ်လွှာ
YouTube	Facebook	၆၇ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ် ေတာ်လှန်ေရး​ေန့အတွက် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်မှ ေပးပို့ေသာ သဝဏ်လွှာ	Tuesday, 27 March 2012 20:38	Written by Info.NLD	0 Comments
ယေန့သည် ၆၇ ြကိမ်ေြမာက် ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးေန့ြဖစ်ပါသည်။ ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစံု​ပါဝင်ေသာ ြပည်သူလူထုြကီးက တရားမဲ့အာဏာသံုးြပီး ြပည်သူေတွရဲ့ဘဝကို ချုပ်ချယ်ဖိနင်းတဲ့ စနစ်ဆိုးကို ဖယ်ရှားခဲ့ေသာ လှုပ်ရှားမှုြကီးြဖစ်ပါသည်။ယေန့မှာလည်း ကျမတို့ေတွသည် အေြကာက်တရား လွှမ်းမိုးမှုကို ေတာ်လှန်ြပီး ကိုယ်လိုလားေသာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခု ထူေထာင်နိုင်ရန် ြကိုးပမ်းေနရေသာ အချိန်အခါြဖစ်ပါသည်။ “စိတ်ဓါတ်ေတာ်လှန်းေရးြကီး” ကာလလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။ ေတာ်လှန်ေရးသမား ေကာင်းမည်သည် ကဗျာဆရာြကီး မင်းသုဝဏ် ၁​၉၆၃ ခုနှစ် ေတာ်လှန်ေရးေန့အတွက် ေရးသားခဲ့ေသာ “သူ့မှာတမ်း” ကဗျာပါ စိ်တ်ဓါတ်မျိုးကို ေမွးြမူရမှာြဖစ်ပါသည်။ “ငါအများြကီးလုပ်ခဲ့ြပီးြပီ” ဆိုေသာ စိတ်ဓါတ်မျိုး ဘယ်ေတာ့မှ မထားပဲ “ငါလုပ်ေပးစရာေတွ အများြကီးရှိေန ေသးပါလား” ဆိုေသာ စိတ်ဓါတ်သာ ရှိရမှာြဖစ်ပါသည်။ ကဗျာထဲတွင် ကွယ်လွန်ကာနီး ေတာ်လှန်ေရးသမားကို ရွာသားများက ဝိုင်း၍ “…. တိုင်းြပည်ကို ဘာများ မှာခဲ့လိုသနည်းေမးရာ” “ခရီးမတ်တပ်၊ လမ်းခုလပ်တွင်၊ ကိုယ်လွတ်ေရှာင်ခွာ၊ ခွဲရပါ၍ အားနာခဲ့ေြကာင်း …. ေြပာပါေလ” ဟု အသက်မထွက်မှီ စကားပါးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကျမတို့ယခု စိတ်ဓါတ်ေတာ်လှန်ေရး ဆင်နွဲေနရေသာ ကာလတွင် တိုင်းချစ်ြပည်ချစ် တိုင်းရင်းသားအားလံုးသည် မိမိတို့အေနနှင့် မည်မျှလုပ်ခဲ့ြပီးြပီဟူ၍ မစဉ်းစားပဲ မည်မျှလုပ်ရန် ရှိေသးသည်ကိုသာ အာရံုစိုက်ေစချင်ပါသည်။ကျမတို့ ြကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားချိန်မှစ၍ မသမာမှုအမျိုးမျိုး အထူးသြဖင့် ြပည်သူကို ြခိမ်းေြခာက် ဖိအားေပးမှု အမျိုးမျိုးြဖင့် ြကံုေတွ့ခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့အခက်အခဲများကို ြပည်သူနှင့် ကျမတို့ ဒီမိုကေရစီ အမှန်တကယ်လိုလားေသာ အဖွဲ့အစည်းများက ထက်ြမက်ေသာ သတ္တိ၊ ခိုင်မာေသာဇွဲ၊ ဝိရိယနှင့် ရင်ဆိုင် ေကျာ်လွှားရပါမည်။
ကျမတို့နိုင်ငံ ေအးချမ်းသာယာေစရန် အဓိကေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေသာ အင်အားစုမှာ ြပည်သူများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူအများ​လိုလားေနေသာ ဒီမိုကေရစီြပည်ေထာင်စုြကီး ထူေထာင်ရန် ဦးတည်ေသာ ြပည်သူ စိတ်ဓါတ်ေတာ်လှန်ေရးြကီး ေအာင်ြမင်ပါေစေြကာင်း ယေန့ ၆၇ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ် ေတာ်လှန်ေရးေန့တွင် ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါသည်။
၆၆ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ်ေတာ်လှန်ေရးေန့ အြကိုေဟာေြပာပွဲ
အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ၆၆ နှစ်ေြမာက် ဖက်ဆစ် ေတာ်လှန်ေရးေန့ အခမ်းအနား NLD တွင် ကျင်းပ